सरकारलाई चिकित्सक संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम, अब के हुन्छ देशमा ? – Rastriyapatrika
सरकारलाई चिकित्सक संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम, अब के हुन्छ देशमा ?
काठमाडौं : नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकको समस्या वार्ता र संवादको माध्यमद्धारा समाधान गर्न आग्रह गर्दै ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले विहिवारदेखि ७२ घण्टाभित्र वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न माग गरिएको बताए । संघले चिकित्सकको समायोजनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेज, विभिन्न विशेषज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनधि लगायतका चिकित्सापेशासँग संलग्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुबीच विहिवार छलफल गरिएको थियो । चिकित्सकको माग र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै पेशागत मान मर्यादालाई अवमूल्यन गरिए संघले सशक्त ढंगले विरोधका कार्यक्रम मुलुकभर सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरुलाई संघबाट घोषणा हुने सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरुको लागि तयारी अवस्थामा बस्ने समेत अनुरोध गरिएको छ । संघबाट घोषणा गरिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरुबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुने जनाइएको छ ।
अस्पताल बाहिर ओपिडि
सरकारी चिकित्सक संघ ( गोदान)को आव्हानमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले विहिवार पनि अस्पताल बाहिर बहिरङग विभाग (ओपिडि) संचालन गरेका छन ।
वीर अस्पतालको प्राङगणमा गोदानको छाप प्रयोग गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकले विरामी जाँच गरेका थिए । गत शुक्रवारदेखि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले आकस्मिक सेवा वाहेकका उपचार सेवा बहिष्कार गर्दै आएका थिए । संघ अन्तर्गत चिकित्सकलाई समायोजन गरेर सेवामा खटाउनु पर्ने माग आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको छ ।